စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင် မုံရွာမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး
Sagaing Region Government/ monywa / August 08, 2020
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်သည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ (၇.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ကျင်းပပြလုပ်သော မီးငြိမ်းသတ်ယာဥ်နှစ်စီး လွှဲပြောင်းပေးအပ်သို့ တက်ရောက်ပြီး နိုင်ံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ချောင်းဦးမြို့ ရောက်ရှိစဉ် လမ်းညွှန်မှုအရ ချောင်းဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ချောင်းမနားကျေးရွာနှင့် နတ်ရေကန်ကျေးရွာတို့၏ မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ်(၇၈.၄)သန်းဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ‌ဂါလံ(၈၀၀)ဆံ့ ဒေါင်ဖန်း မီးငြိမ်းသတ်ယာဥ်နှစ်စီးအား တာဝန်ရှိသူများထံသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မုံရွာမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နှင့်အဖွဲ့သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ကျင်းပပြလုပ်သော မီးသတ်စွမ်းရည် သရုပ်ပြပွဲအား ကြည့်ရှု့အားပေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ မုံရွာမြို့ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်ရှိ အောင်မဟာလမ်း (၁၁၉၅၅×၂၂)ပေ အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် လမ်းသားချဲ့၍ ကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးအခြေအနေ ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အနော်ရထာလမ်း ကတ္တရာလမ်းချဲ့၍ လမ်းသားမြှင့်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ နှင့် ကမ်းနားလမ်း အေးသာယာလမ်းဆုံအား အဖြောင့်ကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေတို့အား ကြည်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များကိုတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကာ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းညွှန် မှာကြားခဲ့သည်။ ​​​​​​​
Vol. VII, No. 164, Sunday, 27 September 2020
Posted on Sep 27, 2020 Download
Vol. VII, No. 163, Saturday, 26 September 2020
Posted on Sep 26, 2020 Download
Vol. VII, No. 162, Friday, 25 September 2020
Posted on Sep 25, 2020 Download
Vol.VII, No. 161, Thursday, 24 September 2020
Posted on Sep 24, 2020 Download
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉၈/၂၀၂၀) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Stay at Home အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်သည့် အာမခံအလုပ်သမားများအား လုပ်ခလစာ၏ ၄၀ % ငွေကြေးခံစားခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉၆/၂၀၂၀) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာ
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသား (ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်) ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား စျေးခုံအများစနစ်အား အခြားနည်းဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် တတိယအကြိမ်လေလံအောင်မြင်သူစာရင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း